यौन सम्पर्क राख्न डर लाग्छ - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
यौन सम्पर्क राख्न डर लाग्छ
म ३२ वर्षीया युवती हुँ । करिब ७ वर्ष अघि मेरो एकजना केटा साथीसँग यौनसम्पर्क भएको थियो । मलाई यौनसम्पर्क गर्न अति इच्छा हुन्छ तर मैले कसैसँग पनि यौनसम्पर्क गरेकी छैन किनभने ममा चाहना भए पनि अर्को पुरुषसँग यौनसम्पर्क राख्ने सोच मात्र राख्दा पनि एकदम डर लागेर आउने, मुटु कमजोर हुने, आत्मविश्वास हराउने आदि हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ममा केही गर्ने आँट वा हिम्मत नआउने, आफसे आफ आत्मबल घटेर जाने हुन्छ जसले गर्दा कसैसँग पनि घरवार जोड्न नसक्ने गरी मेरो जीवन वरवाद भएको छ । पुरुषसँग सम्बन्ध राखेर पनि म कसरी निडर रहन तथा आत्मबल गुमाउनबाट जोगिन सक्छु ? किन कसैसँग यौनसम्पर्क राख्दा मानिस यति धेरै डराउँछ ? यो समस्या समाधान गर्न मैले के गर्न सक्छु ?
तपाईंलाई थाहा भएकै कुरा हो कि कारणअनुसार यसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंमा भएको यस प्रकारको भयको जडसम्म पुग्न आवश्यक छ । तपाईंले यसको जडसम्म पुग्न आफैंलाई र आफ्नो विगतका घटना र त्यसले आफूलाई पारेको प्रभावका बारेमा केलाउनु पर्ने हुन्छ । कतिपय स्थितिमा आफैंले आफ्नो स्थिति केलाउन सजिलो नहुन सक्छ । त्यसका लागि तपाईंले मनोचिकित्सक, मनोरोग विशेषज्ञ वा मनोपरामर्श दिने व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । यो पक्कै हो कि यस्ता किसिमका समस्या समाधान गर्न र सामान्य स्थितिमा आउन समय लाग्न सक्छ तर तपाईं आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुभयो भने यस्ता समस्याको समाधान सम्भव छ । तपाईंको यौन जीवनमा साथ दिने कोही न कोही व्यक्ति पक्कै आउनेछ अनि कतिपय स्थितिमा उ पनि तपाईंको समस्या कम गर्न सहयोगी हुनसक्छ ।